DOWNLOAD MASTER MAPS FARANY - PROGRAMME REVIEW - 2019
Master of Postcards 7.25
Ao amin'ny aterineto misy karatra virtoaly efa vita marobe, saingy tsy izy rehetra no mety amin'ny tranga manokana sy ny fepetra ilaina. Noho izany dia manoro hevitra isika amin'ny fampiasana rindrambaiko manokana hamoronana ny kartie manokana. Anatin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny fandaharana "Master of Postcards" amin'ny antsipiriany.
Ny dingana amin'ny famoronana tetikasa iray
Ny "Master of Postcards" dia tsy tonian-dahatsoratra na lahatsoratra amin'ny endriny, ka ny lahasa rehetra amin'izany dia mifantoka amin'ny famoronana asa sasantsasany. Mila manomboka amin'ny famoronana dingana vaovao na manokatra asa tsy vita izay aseho ao "Projects Recent".
Raha toa ianao ka mamorona amin'ny scratch, dia manapaha hevitra momba ny karazana karta - dia mety ho tsotra na tafiditra. Ny tarehimarika eo amin'ny sehatra sy ny endrik'ilay tetikasa dia miankina amin'izany.
Mba hamerenana ny fotoana sy hampisehoana ny mpampiasa tsy manana traikefa ny fitsipiky ny fandaharana, ireo mpandraharaha dia nanampy lisitr'ireo rakitra maimaim-poana afaka maimaim-poana, ary hahita ny sisa amin'ireo kitay ao amin'ny tranonkala ofisialy, ny ankamaroan'izy ireo dia aloa.
Ankehitriny dia ilaina ny manokana fotoana ho an'ny mari-pamantarana pejy. Ny habe dia tokony hantsana kely kokoa mba hialana amin'ny singa rehetra, fa raha ilaina dia afaka manova azy bebe kokoa. Ny eo ankavanana dia ny fijerena ny lamba, ka azonao alaina sary an-tsaina ny toerana misy ny ampahany tsirairay.
Mitandrema amin'ny mpamorona format, izay misy banga maromaro. Ampiasaina izy ireo hamoronana tetikasa misy karazana manokana, araka ny aseho amin'ny lohateny. Ny mpampiasa dia afaka mamorona sy mamonjy ny banga manokana.
Free editing background
Raha mifidy iray amin'ireo sasantsasany ianao, dia tsy ilaina izany asa izany, na izany aza, rehefa mamorona tetikasa avy amin'ny scratch dia hilaina izany. Misafidy ny karazana sy loko eo amin'ny votoatin'ilay karta ianao. Ankoatra ny fampidirana loko sy tontonana, ny famoahana sary avy amin'ny ordinatera dia tohanana, izany dia hanampy amin'ny fanatontosana ny asa miavaka.
Ampio sary mahomby
Ao amin'ny fizarana iray dia misy tabilao telo, ahitana tarehimarika maromaro, saron-tava ary filaharana isan-karazany. Ampiasao izy ireny raha te-haneho amin'ny antsipiriany ilay tetikasa ianao na hampiavaka azy bebe kokoa. Ankoatra izany, ny singa tsirairay azon'ny mpampiasa dia afaka mampiasa ny tonian'ny fanorenana.
Preset Jewelry Set
Ireo zavakanto dia eo amin'ny fizarana an-tsoratra ny lohahevitra tsirairay. Tsy misy famerana amin'ny fampakarana ny endriky ny lamba. Tandremo ny fomba amam-panao amin'ny famoronana ny cliparinao manokana - izy io dia manomboka amin'ny fividianana ny dikan-teny feno "Master of Postcards".
Text sy ny banga
Ny lahatsoratra no singa manan-danja indrindra amin'ny karatra mailaka rehetra, noho izany, ity programa ity dia manome fahafahana hanampiana soratra, ary ampiasaina ihany koa ny fampiasana vorona voaomana, izay azo ampiharina amin'ny lohahevitra iray. Ny ankamaroan'ny template dia mikendry ny fialantsasatra fialantsasatra.
Hazo sy Preview
Ny ankavanana amin'ny sakafo maina dia ny fijerena sarimihetsika. Ny mpampiasa dia afaka mamindra amin'ny zavatra rehetra mba hifindrana, hanova na hamafa izany. Mivadika eo anelanelan'ny pejy sy ny lay eo amin'ny tsangana iray eo amin'ny ankavanana. Ankoatra izany, eo an-tampon'ireo fitaovana misy eo amin'ny fitaovana fanovana, manova, manetsika, manindrona na mamafa.
Click on "Karatra fitahirizana"hijerena ny pejy tsirairay amin'ny antsipiriany ary handinika ny endrik'ilay tetikasa farany. Ataovy azo antoka ny fampiasana io endri-javatra io alohan'ny hisakafo, mba tsy hanadino ny antsipiriany manan-danja sy hanitsy ny fahadisoana natao, raha toa ka miseho izy ireo.
Ny fandaharana dia feno amin'ny teny Rosiana;
Tombontsoa maro sy banga maro;
Misy zavatra rehetra mety ilainao mandritra ny famoronana karatra.
Ny programa dia zaraina amin'ny vidiny.
Azontsika atao tsara ny manolotra "Master of Postcards" ho an'ireo mpampiasa izay te-hamorona haingana ny tetikasa. Fitantanana sy famoronana tena tsotra, mazava ho azy fa ho an'ny mpampiasa tsy manana traikefa. Betsaka amin'ny fanorenana tranobe dia hanampy amin'ny fanatanterahana haingana ny tetikasa.
Download ny fizarana masin'ny Master Postcards
Fandaharam-potoana hamoronana karatra Master of Business Cards Sary Sary Master 2
Card Wizard dia programa manokana izay natao hamoronana haingana haingana karatra fiarahabana. Ny fonctionna dia ahafahanao mamorona tetikasa iray amin'ny scratch, ary ampiasao ny banga.
Sarany: $ 10